Moments Neshamwari 35
Sei nyoka ichiratidzwa zvakasiyana nevanhu vakasiyana? Dzimwe nguva nyoka inotaurwa nezvayo semumiriri wezvakaipa, pane dzimwe nguva chiratidzo chehungwaru. Nei munhu aine kutya kwekugara kwenyoka?
Dzidzo uye kurovedzwa zvine chekuita nemabatirwo anoitwa munhu nenyoka uye nezvimwe zvisikwa zvese. Asi pane chimwe chinhu mumurume iye amene kunze kwedzidzo yake icho chinosarudzira vamwe. Nyoka inogona kutaridzika nenzira yakakodzera seyakanaka uye yakaipa kana sechiratidzo cheuchenjeri. Zvinoenderana nechimiro chinotorwa. Kunze kwekuparadzwa kwetsoka idzo dzimwe dzinodyirwa nenyoka, hazvizivikanwe kuti nyoka dzinopa chero mabhenefiti akakosha pamunhu nepasirese, kana kuti vanoratidza chero hunhu hunoshamisa kupfuura dzimwe mhuka, kana kuti vanoratidza zviratidzo zvehuchenjeri hukuru kupfuura humwe. mafomu emhuka. Kusiyana neizvozvo, dzimwe nguva ivo matsi uye mapofu; vanokwanisa kuzvinyudza pachavo kuti vapinde mukukanganisa, vasingakwanise kuzvidzivirira kana kuramba vari munjodzi, uye kurumwa nedzimwe nyoka kunouraya zvekuti kubereka rufu nekukurumidza mushure mekunge munhu arumwa. Asi pane nyoka mashoma zvisingaori zvisina kukuvara, uye kufamba kwenyoka kuri pakati pezvakanaka kwazvo uye nekukurumidza nekukurumidza pazvisikwa zvese.
Hakuna chinhu chinoitwa nenyoka kana chero chinangwa charinobata icho chingave chinogonesa kutaurwa nezvake sewakachenjera pane zvisikwa kana sechiratidzo chehungwaru. Asi kubva pamavambo enguva saji vakataura nezvayo uye magwaro anozvitaura sewakangwara pazvisikwa zvese, akazvishandisa sechiratidzo chehungwaru.
Pane zvakawanda zvikonzero nei iyo inyoka inogona kunyatsonzi chiratidzo cheuchenjeri. Zvirinani kupfuura chero chimwe chisikwa chinomirirwa nenyoka, zvine hukama uye zvinofambiswa nemagetsi emuchadenga, iro simba rinopa huchenjeri kumunhu, kana munhu achinge azvigadzirira kuzvigamuchira. Mumamiriro ezvinhu aripo emunhu haana kukodzera uye haakwanise kuita kuti simba iri riite zvakananga kuburikidza naye. Nhengo yenyoka inoumbwa kuti ibvumidze kuita kwakananga kwesimba remagetsi. Asi simba haripe huchenjeri kunyoka; zvinongoshanda kuburikidza nemuviri wenyoka. Pfungwa inodiwa kuti uzive uye ushandise huchenjeri. Iyi inyoka haina. Nyoka ine yakanyanya uye nehupfumi vertebrated mhuka yemuviri. Iyo spinal safu inomhanya nenyoka yose, uye ndiyo musana wedumbu kuburikidza neiyo magetsi emagetsi anoita. Iyo spinal column iri mumunhu iri muchimiro senyoka, asi musana uri mumunhu hautenderi iwo magetsi magetsi kuti abate zvakananga mukati mawo nekuti iye zvino rabviswa kubva kumuzana wedemo nezvino zvinoshandiswa izvo iyo nerve mafungu eiyo kusimudzira muviri kubva mudumbu remuti unoiswa. Kurongeka kwazvino kwenzara uye mashandisirwo enzwi retsinga kunodzivirira simba rose remagetsi kuita kubva zvakananga nemuviri uye kuvhenekera pfungwa dzemunhu. Mumatumbu uye mudumbu mematunhu emukati mutsipa wakasunganidzwa, senyoka. Idzi tsono dzave kupa nhengo dzinoburitsa nesimba ravo rekuita. Izvo zvinonzi mumabhuku Ekumabvazuva kuti kundalini, iro simba renyoka, rakabatanidzwa mukati medumbu nekurara; asi kuti kana iri simba renyoka paramutswa rinovhenekera pfungwa dzemunhu. Kududzirwa, izvi zvinoreva kuti dzimwe nzendo dzemitsipa yemuviri, ikozvino yakashandiswa kana kushandiswa zvisirizvo, inofanirwa kudaidzwa kuita kwayo; ndiko kuti, izvo zvichavhurwa uye zvakabatana netambo yemuzongoza. Kuitwa kweizvi kwakafanana nekuchinja kweiyi kiyi pane yemagetsi switchboard inotarira pane zvazvino uye inotanga michina kushanda. Kana iyo yazvino yakavhurwa uye inoenderana netambo yemuviri mumuviri wemunhu magetsi emagetsi anotenderwa. Ino yekutanga ino inoita kuburikidza nemitsipa yemuviri. Kana iyo neropa yemasangano yemuviri isina kusimba uye inokodzera izvo zvazviri zvinopisa nerves. Zvinoenderana nekusakwana, ichaita kuti muviri urware, usakanganisika, ubudise utsinye kana kukonzera rufu. Kana iyo neropa organisheni yakakwanira iro simba rinoita kuti astral fomu muviri uyezve rinojekesa uye rinovhenekera pfungwa, kuti zvakapfuura ipapo pfungwa vangazive chero chinyorwa maererano nezvenyama yepasirese kana nyika yeastral. Simba iri rine kufamba kwenyoka uye rinoita kuburikidza nemuzongoza mukati memuzongoza, iri muchimiro cheinyoka. Kufanana nenyoka, simba rinozouraya rufu kune iye anomutswa uye haakwanise kuhuruka. Senge senyoka, simba rinokudziridza muviri mutsva uye rinodudza rachembera senge nyoka inodudzira ganda rayo.
Munhu ane chekutya mhuka nekuti mhuka imwe neimwe iripanyika yakasarudzika uye yakasarudzika chishuwo chiri mumunhu, uye chipfuyo chinotyiwa nemurume chinomuratidza chimiro chakasarudzika chekuchiva kwake chaasina kufunda. Kana iye ari tenzi uye achikwanisa kudzora chishuwo chake murume haazotya mhuka uye mhuka haingatyi uye haina kukuvadza munhu. Munhu ane chekutya chinyoka nekuda kwekuti haana kugona uye haakwanisi kudzora simba riri maari rinomiririrwa nenyoka. Yet inyoka inokwezva yemunhu, kunyangwe iye achizvitya. Pfungwa yehungwaru inotaridzikawo kumunhu. Asi anofanira kukunda kutya uye kuda chokwadi asati awana huchenjeri, zvimwe, sesimba senyoka, zvichamuuraya kana kumuita kupenga.
Pane chokwadi here munhau dzemaRicicrucians dzave dzichipisa mwenje? Kana zvakadaro, vakaitwa sei, vakashandira chinangwa chei, uye vanogona kuita uye kushandiswa zvino here?
Iko hakuna chikonzero chakaringana nei maRosicrucians kana mamwe ma mediaeval body anga asingafanire kugadzira uye kushandisa mwenje unopfuta zvachose. Chikonzero nei isu vemazuva ano tichifungidzira kupisa mwenje iri ngano yakagadzirwa nefungidziro, zvakanyanya nekuda kwemafungiro edu kuti mwenje unofanirwa kunge uri mudziyo une zvinhu zvinopisa, senge waya uye mafuta, kana iyo inoshandiswa gasi kuvhenekera inoshandiswa , kana kuburikidza neayo magetsi emagetsi akapfuura uye ichenesa nekusajeka kwekusakwana kwezvibodzwa. Pfungwa iripo, kuti ndidzo dzinopihwa mwenje.
Iyo yakagadziriswa mwenje inogara ichipfuta yeRosicrucians inofungidzirwa kuti haina musoro nekuti isu tinofunga kuti mwenje haugone kupa mwenje pasina mafuta kana chimwe chinhu chakapihwa icho. Izvo zvinofungidzirwa kuti rambi rinogara riripfuta rinongova rimwe rezvizhinji zvinofungidzirwa kuti zvisingaitike izvo zvinowedzera mutsika maererano neRosicrucian uye mediaeval nguva.
Hatigone kutaura kuti maRosicrucian kana vamwe varume vari pakati nepakati vakagadzira mwenje unogara uchipfuta, asi musimboti uyu mwenje ungagadzirwa unogona kutsanangurwa. Ngatitange kunzwisiswa kuti rambi rinogara richitsva haridyi mafuta kana gasi kana chero chimwe chinhu icho chiri madikanwa kugovera nenzira yemamishini. Muviri uye chimiro chemwenje unogara uchipfuta chinogona kunge chiri chechinhu chakakodzera kushandiswa iro rambi rinofanirwa kuiswa nepfungwa iye anofunga uye anoigadzira. Chikamu chakakosha chemwenje ndicho chairo zvinhu kuburikidza nazvo izvo mwenje unopihwa. Chiedza chakaiswa kubva kune ether kana astral mwenje. Iyo haina kugadzirwa neyakaipisa nzira. Icho chinyorwa chinoshandiswa kusimudzira mwenje chinofanirwa kuve chakanyatsogadzirirwa uye kugadziriswa kana kubatanidzwa kune etheric kana astral mwenje. Kugadziriswa kwechinhu ichi uye kuyedza uye kugadzirisa kwayo kune ether kana astral mwenje chimwe chezvakavanzika zveRosicrucians uye Fire Philosophers. Kuti zvese izvi zvinogona kuve zvave, zviri kuratidzwa nekuwanikwa kweradium. Radium inoita kunge ichipa mwenje isina kuzvipedza kana kuderera muhuwandu. Radium haina sezvainofanirwa kupa chiedza kubva pachayo. Chiedza chakaiswa uye inotaridzirwa ne radium. Chiedza chinoratidzika kunge chinodururwa ne radium kubva kune ether kana astral mwenje. Iyo radium inoshanda svikiro chete kuburikidza neiyo iro mwenje unounzwa uchibva kune nyika yeastral uye unoratidzwa kumweya wepanyama.
Chinyorwa icho chakauya iwo mwenje wemwenje unogara uchipfuta wevaRosicrucians wakarongedzwa pamisimboti yakafanana kunyangwe iyo yaigona kuve yakagadzirirwa nenzira dzakasiyana uye inogona kunge yaive yemidziyo yakasiyana pane radium, sezvo paine mafomu ezvinhu kunze kwemaradium kubudikidza nechiedza icho. kubva kune ether kana astral world inogona kuratidzwa mune yepanyama.
Mwenje dzinogara dzichipfuta dzakanyanya kunge dzakagadzirirwa akawanda uye akasiyana madhora. Rambi rakavakirwa chinangwa chimwe chete raitadza kuiswa kumashandisirwo ese ayo mwenje unopfuta waimboitirwa. Saizvozvo semuenzaniso, radium inopa mwenje, asi radium haisi kushandiswa izvozvi sechiedza nekuti haisi kungoita kugadzirira kwayo inodhura kuti ishandiswe pakadaro, asi nekuti mwenje wakaratidza kukuvara padyo nemiviri yemhuka.
Heano mashoma ezvinangwa izvo iwo unogara uchipfuta mwenje ungave wakagadzirwa uye wakashandiswa: Kupa mwenje pakaungana pakavanda; kutarisa mukati uye kuongorora iyo nyika yeastral uye mimwe yayo masangano; kudzivisa zvinopesana nezvinopesana nemasangano anopesana nebasa umo mumwe kana anopfuura angave achiitwa; kuchengetedza iyo yemuviri uye astral muviri panguva yekurara kana panguva yekutsamwa; senzira yekurapa masimbi ekuchinjisa; senzira yekugadzirira dzimwe nzira dzisingabvumirwe pakurapa kana kuitisa kutuka; kugadzirisa manzwi emuviri kune anoshamisa kana mukati memukati mairi izvo zvisingaonekwi zvenyeredzi dzemadzinza zvaigona kupinda mukati.
Mamwe mwenje unogara uchipfuta unogona kugadzirwa izvozvi, asi kunyangwe zvingave zvakagadzirwa mune ramangwana hazvidikanwe kuzvishandisa izvozvi. Ivo vange vachishandiswa mune zvepfungwa kana zveastral maitiro nezvinangwa. Iyo nguva yebasa rakadaro yapfuura. Pfungwa dzemurume dzinofanira kunge dzichikura kubva mumaitiro akadaro. Izvo zvaidzorwa neyemwari nzira zvinogona uye zvinofanirwa kuve zvino kudzorwa nepfungwa uye pasina imwe nzira kunze kweiyo yakapihwa nemiviri yemunhu miviri. Pfungwa dzinofanira kunge dziri mwenje kune wega. Muviri wayo unofanirwa kuve iwo mwenje. Munhu anofanirwa kugadzirira muviri wake uye kuuunza pasi pesimba repfungwa kuti pfungwa dzichavhenekera mukati maro uye kuvhenekera nyika yakatenderedza, uye kugadzira wemunhu anoonekwa arambe achibvira mwenje uyo unovhenekera mwenje nguva dzese.